Dhaqdhaqaaqa Dhagaysiga Loophololes ee ka tagaya Minnesota Streams Unprotected
Xarunta Cilmi-baarista iyo Xarunta Siyaasadda Mareykanka
The Xarunta Cilmi-baarista iyo Xarunta Siyaasadda Mareykanka waxay u shaqeeyaan inay wax bartaan dadweynaha waxayna ku guuleystaan natiijooyinka la taaban karo ee nadiifinta biyaha nadiifinta iyaga oo u maraya cilmi baaris iyo u doodis.
Dad iyo ururo kala duwan oo ku yaalla gobolka Minnesota ayaa ku biiray Deegaanka Ameerika si ay ugu doodaan biyo nadiif ah, oo ay ka mid yihiin in ka badan 40 saraakiil la soo doortay, 35 ganacsade yaryar oo maxalli ah, iyo in ka badan 30 kooxood oo kale oo leh saamiga biyaha nadiifka ah.
Loopholes ee Xeerka Biyaha nadiifka ah ayaa ka baxsan in ka badan 50% dooxooyinka Minnesota ee aan la ilaalin. Sannadka 2015, EPA waxay soo jeedisay Xeerka Biyaha ee Nadiifinta ah kaas oo xiri doona cilladahaas oo ay ka caawinayaan in la hubiyo in harooyinka Minnesota - iyo biyaha la cabbo ee ka badan 970,000 qof reer Minnesota ah - mar kale si buuxda loogu ilaaliyo Sharciga Biyaha. Deegaanka Ameerika iyo Deegaanka Ololaha Nadiifinta Nadaafadda ee Minnesota ayaa ka shaqeynaya Minnesota si loo dhiso awoodda aasaasiga ah ee aan u baahanahay inaan taageerno Xeerka Biyaha.
Dad iyo ururo kala duwan oo ku yaalla gobolka Minnesota ayaa ku biiray Deegaanka Ameerika si ay ugu doodaan biyo nadiif ah, oo ay ka mid yihiin in ka badan 40 saraakiil la soo doortay, 35 ganacsade yaryar oo maxalli ah, iyo in ka badan 30 kooxood oo kale oo leh saamiga biyo nadiif ah. Wada-hawlgalayaasha isbahaysiga ayaa ka caawiyay inay daabacaan waraaqo u diraan tifafayaasha waraaqaha maxaliga ah, iyaga oo soo saarey tobanaan taleefan oo loo soo diro sharci-dajiyayaal, ayna soo bandhigaan arrinta arrimaha warbaahinta bulshada.